မဟာသန္တိသုခကိစ္စ ဒုတိယရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ဖန်တီးခြင်းဟု ဆရာတော်ဝီရသူမိန့်ကြား
ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်ကို နိုင်ငံတော်သံဃနာယကမဟာနယကနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံးဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းသည့် ဒုတိယအကြိမ်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖန်တီး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဇွန် ၁၂ ရက်က ဆရာတော်ဝီရသူမှ မဇ္ဈိမကို မိန့် ကြားသည်။
“ဟိုမှာတုန်းက (ပထမအကြိမ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး)က စစ်အစိုးရကို ကြောက်လို့ သံဃနာယက မပြောရဲတာ။ ဒီတစ်ခါကတော့ သံဃနာယက ကိုယ်တိုင်ကိုက ဒုတိယရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းကို ဖန်တီးလိုက်တာ”ဟု ဆရာတော်ဝီရသူက မိန့်သည်။
At 6/13/2014 12:31:00 PM 1 comment:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နီပေါနိုင်ငံခရီးစဉ်ထွက်ခွာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Sushil Koirala ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နီပေါနိုင်ငံ၊ ခတ္တမန္ဓူမြို့သိုသွားရောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုငရာလေဆိပ်သို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေနံနက် ၆း၁၅ မနစ်တွင်ရောက်ရှိလာပြီး ၊လေဆိပ်မှ ဒီချုပ်နာယကကြီး ဦးတင်ဦး၊နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာသံ အမတ်ကြီးနှင်အဖွဲချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများမှကြိုဆိုကြပြီး ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်.အဖွဲ သည် နီပေါနိုင်ငံသိုထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း မှTG 703 ဖြင်.့  နံနက် ၆း၃၀ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှထွက်ခွါပြီးအဆိုပါခရီးစဉ်တွင် နီပေါနိုင်ငံသမ္မတ Rt. Hon. Dr. Ram Baran Yadav, ဝန်ကြီးချုပ် Rt. Hon. Mr. Sushil Koirala တို့နှင့် တွေ့ဆုံမည့်အပြင် နီပေါနိုင်ငံ လွှတ်တော် (Baneshwar) သို့ သွားရောက်လေ့လာကာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Subash Chandra Nembang နှင့်လည်း တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပါသည်။
At 6/13/2014 10:45:00 AM No comments:
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး သဘောတူညီချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်၊ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Maj.Gen. Aziz Ahmed, psc, G ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဇွန် ၁၀ ရက်က နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်၊ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၂) ရက် နေ့အထိ နေပြည်တော်၊ Horizon Lake View Resort ၌ ပထမအကြိမ် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
At 6/13/2014 10:43:00 AM No comments:
ပြည်လမ်းနှင့် ပါရမီ လမ်းထောင့် အေဒီမီးပွိုင့်တွင် ကားခေါင်မိုးပေါ်၌ အတွင်းခံ ဝတ်စုံဝတ်ကာ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ယာဉ် ကြောကျပ်တည်းမှုအပေါ် တစ် ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူ အသက် (၃၀)ကျော် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မရမ်းကုန်းရဲစခန်းက ခေတ္တထိန်း သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘သူနဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူတွေ လာခေါ်တဲ့အထိ စခန်းမှာခဏထားမှာပါ။ အမှုမဖွင့်ထားပါဘူး။ လူကောင်း ပကတိပါ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး’’ဟု မရမ်းကုန်းရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ဖြေကြားသည်။
At 6/13/2014 09:29:00 AM No comments:
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဒေါက်တာကျင်ဌေးအမှု ၀န်ကြီးဌာနရှုံး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဖြစ်ပွားနေသော အမှုအတွက် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေးဌာန၊ ဌာနမှူးဒေါက်တာဒေါ်ကျင်ဌေးကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အနိုင်ပေးသော အမိန့်ချ မှတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ် တော်ချုပ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သော ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဌာန၀န်ထမ်းတို့ ထိပ်တိုက်အမှု ရင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဌာန၀န်ထမ်း က အနိုင်ရလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဒေါ်ကျင်ဌေး၏ ရှေ့နေက ပြောသည်။
At 6/13/2014 09:25:00 AM No comments:
အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေ ဘဂ္ဂဒက်ကို သိမ်းဖို့ခြိမ်းခြောက်
အီရတ်မှာ အချက်အခြာကျတဲ့ မြို့ကြီးအတော်များများကို အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေ ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အီရတ်မြို့တော် ဘဂ္ဂဒက်ကို သိမ်းပိုက်မယ်လို့ အစ္စလာမစ် Sunni စစ်သွေးကြွတွေက ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။ Shiite မူစလင်တွေရဲ့ ဘာသာရေး အထွဋ်အမြတ်နေရာဖြစ်တဲ့ Karbala ကိုလည်း သိမ်းပိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း အယ်လ်ကိုင်းဒါး နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ISIL အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ကပြောပါတယ်။
At 6/13/2014 09:17:00 AM No comments:
မေလ ၃၀ ရက်နေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန် အစည်းအဝေး ခေတ္တနားချိန်မှာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လွှတ်တော်ရဲ့အထက်မှာ တပ်မတော် ရှိနေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်က အဆိုတင်သွင်းတဲ့ ဥပဒေတစ်ခု အတည်ပြုဖို့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ဆန္ဒက အဓိကမူတည်နေပြီး တပ်မတော်သားတွေ ရဲ့သဘောထားက ကာချုပ်ရဲ့ သဘောထားဖြစ်တာကြောင့် လွှတ်တော်ရဲ့ အထက်မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရှိနေကြောင်း၊ တပ်မတော်က လွှတ်တော်ရဲ့အထက်မှာ ရှိနေကြောင်း စသည်ဖြင့် မီဒီယာသမားများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အပြန် အလှန်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ဂျာနယ်၊ သတင်းစာများနဲ့ အင်တနက် စာမျက်နှာများပေါ်မှာ လွှတ်တော်အထက်တွင် တပ်မတော်ရှိကြောင်း ဝေဝေ ဆာဆာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဝါရင့်၊သဘာရင့် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆောင်းပါးရှင် အများအပြား ကလည်း ထောက်ခံဆွေးနွေးရေးသားမှုတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
At 6/13/2014 09:02:00 AM No comments:
ဇွန် ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြောင့် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးနီးပါး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ကာ သွားလာမှုများ ရပ်ဆိုင်း
ဇွန် ၁၂ ရက် မနက်အစောပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးနီးပါး ယာဉ်ကြောများပိတ်ဆို့ကာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း သွားလာနေသည့် ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသွားပြည်သူများလည်း အချိန်အတန်ကြာသည်အထိ သွားလာမှုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများထံမှ သိရသည်။
အာရေဗျပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော မုန်တိုင်းကြောင့် မုတ်သုံလေအားကောင်းနေကာ ယင်း၏အရှိန်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီး နောက်လေးရက် အထိလည်း မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက ပြောကြားသည်။
At 6/13/2014 08:19:00 AM No comments:
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဇွန်လ ၁၂ ရက်က တစ်နေ့လုံးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကြောင့် သွားရေးလာရေး အခက်အခဲဖြစ် ခဲ့ရာ ရေလျှံနေသော လမ်းပေါ်မှ လမ်းလျှောက်ပြန်နေသူများကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
အာရေဗျ ပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော နွားနောက်မုန်တိုင်းအရှိန် ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများ နောက်သုံးရက်အထိ မိုးကြီးမည်ဖြစ်ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှု များဖြစ် ပေါ် လာနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 6/13/2014 08:09:00 AM No comments:
နေမာ၊ အော်စကာတို့၏ သွင်းဂိုးများဖြင့် အဖွင့်ပွဲကို ဘရာဇီး အနိုင်ရ
ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေသည့် ဘရာဇီး အသင်းသည် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရသည့် ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ၏ အဖွင့်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက် ခရိုအေးရှားကို ပွဲချိန် အစောပိုင်းကတည်းက ဦးဆောင်ဂိုး ပေးလိုက်ရသောကြောင့် နောက်မှ လိုက်ကစား ခဲ့ရသေးသော်လည်း လူငယ် ကစားသမား များ ဖြစ်သည့် နေမာ၊ အော်စကာ တို့၏ သွင်းဂိုးများကြောင့် အဖွင့်ပွဲကို ဂိုးပြတ် အနိုင်ရကာ အဖွင့်လှပခဲ့သည်။
At 6/13/2014 07:58:00 AM No comments: